Zambia Tourism inoonekana naBen Parker
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Zambia Tourism inoonekana naBen Parker
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Zimbabwe Breaking News
Zambia Tourism Agency yakazivisa nezvekufa kwaBen Parker, Sachigaro uye Co-muvambi weTongabezi. Chiziviso chinorava:
Tiri neshungu kwazvo kuzivisa kuti Sachigaro uye Co-Muvambi weTongabezi, Ben Parker, afamba achienda kunzvimbo dzakakura kwazvo mushure mekurwa kwakasimba kwecancer.
Pfungwa dzedu dziri kumhuri yake, mudzimai wake Vanessa, vanasikana vake Natasha, Acacia naTamara nemunin'ina wake nasisi Stephen naNaomi.
Ben akatanga kuuya kuAfrica pazororo rekuyunivhesiti. Aigara achiseka kuti akangogara nekuti kwainaya pazuva raaifanirwa kurova rova ​​kuairport, asi chokwadi mweya wake wainge wakanyatsoenderana nemweya weAfrica kuti umubvumidze kuenda.
Ben aida Zambia nechido zvekuti Zambia hapana chaaigona kuita kunze kwekumuda zvakare. Seizvo vagari vemo vanowanzo rangarira, Ben akasvika muLivingstone muMicrolight ine floats. Iye naWill Ruck Keene vakatanga Tongabezi nematende mana chete uye nemabhagidhi mashoma, asi kubvira ipapo uye kunyangwe paine kurasikirwa kukuru kwaWill patsaona yemotokari, Ben akachinja kurota kwavo kuita imwe yemahotera epamusoro makumi maviri eConde Nast pasi rose.
Ben akachinja kumeso kwekushanya kweZambia kuburikidza nechido chake chekusimudzira nekusimudzira nharaunda. Mune izvi, akabatsirwa nerudo rwehupenyu hwake, Vanessa, uyo akamhanya Tongabezi Trust Chikoro nekuzvipira kweyakapedzisira 23 makore.
Tese tichachema kurasikirwa kwaBen asi isu tichachengeta nhaka yake kwaTongabezi achienda. Rudy Boribon ari pakubata Tongabezi sezvo anga ave nemakore gumi nemaviri uye achaona kuti chiratidzo chaBen choramba chichikura. Mukoma waBen Stephen - anga ari director weTongabezi kwemakore gumi nematanhatu apfuura - achange achitora bhodhi uye mwanasikana wake Natasha acharamba achienderera mberi nebasa rake sedhijitari wekushambadzira.
Rudy at [email inodzivirirwa] kune chero mibvunzo yakawanda
Kudza pa [email inodzivirirwa] yemumiriri & yekushambadzira mibvunzo
Anna at [email inodzivirirwa] yemadhijitari ekushambadzira mibvunzo, uye
Natasha pa [email inodzivirirwa] nechero meseji yega yemhuri panguva ino yakaoma.